‘फ्‍लुको सन्‍त्रास मात्रै, महामारी होइन’ : डा‍. अाचार्य
अशेष अधिकारी आइतवार, श्रावण २९, २०७४
पोखरा मझेरीपाटनका लोचन बिकको गत साता काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पतालमा ‘फ्लु’बाट निधन भयो । बुधबार पोखरा १५ की अर्की महिलाले सोही अस्पतालमा उही स्वास्थ्य समस्याबाट ज्यान गुमाइन् । दुवै जना रुघाखोकी, ज्वरो, टाउको दुखाइ र श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए । कलेजले उनीहरूलाई ग्रान्डी अस्पतालमा रिफर गरेको थियो । पोखराकै हिमाली टोल घारीपाटनकी ३६ वर्षीय अर्की महिलाको काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कडा रुघाखोकीबाटै मृत्यु भयो ।
१२ साउनमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका १४ का खुमप्रकाश अर्याल (४९) को मृत्युको कारण पनि स्वास्थ्य समस्या नै थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार ०७३ माघयता ‘फ्लु’ बाट १० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । महाशाखाका निर्देशक डा. भीम आचार्य ‘स्वाइन फ्लु’ प्रचार गरिएजस्तो रोग नभएको बताउँछन् । यो ‘हल्ला फैलिए जस्तो महामारी होइन । रोगबाट आत्तिनु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जनमानसमा चर्चा बढी भएकाले ‘स्वाइन फ्लु’ भनिएको हो ।
गर्भवती, क्यान्सर, मधुमेह, श्वासप्रश्वास, मिर्गौलाजस्ता दीर्घरोग लागेका मानिसका लागि फ्लु खतरनाक हुन्छ।
तर, यो सुँगुरबाट मानिसमा सर्ने ‘स्वाइन फ्लु’ जस्तो होइन । यो मानिसबाट मानिसमा सर्ने एक प्रकारको ‘फ्लु’ हो । यो मौसम परिवर्तनका कारण देखिने ‘सिजनल फ्लु’ हो ।’मौसमी रुघाखोकीका रूपमा आउने यस भाइरसले शुरुमा मानिसको माथिल्लो श्वासप्रश्वास प्रणालीमा संक्रमण गर्छ । बेलामा उपचार नगरे बिस्तारै फोक्सोमा संक्रमण गरी निमोनिया भई ज्यानैसमेत जानसक्ने आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार यो ‘इन्फ्लुएन्जा ए’ भाइरसले गर्दा लाग्ने रोग हो र यसको भाइरसलाई ‘एच १ एन १ पीडीएम जिरो नाइन’ भनिन्छ ।
शुरुका दिनमा सुँगुरबाट एच १ एन १ को संक्रमण फैलिएकाले स्वाइन फ्लु भनिएको भए पनि अहिले देखिएको फ्लु बर्सेनि देखापर्ने तथा मानिसबाट मानिसमा सर्ने भएकाले यसलाई ‘सिजनल फ्लु’ भनेर बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।यो रोग वर्षको दुई पटक, विशेषगरी माघदेखि चैतसम्म र साउनदेखि असोजसम्म देखिने गर्छ । नेपालगन्ज, भरतपुर, रूपन्देही, झापा, स्याङ्जा, कास्की तथा काठमाडौंमा स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्दै गएको छ । उपचारले निको हुने यसले स–साना बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका मानिसलाई बढी खतरामा पार्छ ।
मौसमी रुघाखोकीका रूपमा आउने यस भाइरसले शुरुमा मानिसको माथिल्लो श्वासप्रश्वास प्रणालीमा संक्रमण गर्छ। बेलामा उपचार नगरे बिस्तारै फोक्सोमा संक्रमण गरी निमोनिया भई ज्यानै जान सक्छ।
गर्भवती महिला, क्यान्सर, मधुमेह, श्वासप्रश्वास, मिर्गाैलाजस्ता दीर्घरोग लागेका मानिसका लागि यो अझ खतरानाक हुन्छ । यो रोग लागेर मृत्यु भएका अधिकांश पूर्वरोगबाट पीडित हुने गरेका छन् । यसबाट केहीको मृत्यु भए पनि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइनसकेको निर्देशक आचार्यको बताउँछन् । फ्लुको लक्षण देखिएमा तुरुन्तै चिकित्सककहाँ लैजानुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।
ज्वरो घाँटी दुख्ने
जिउ दुख्ने र गलेको अनुभव हुने
बच्चाहरूलाई झाडा पखालासमेत हुनसक्ने
खोक्दा हाच्छियुँ गर्दा सफा कपडा, रूमाल वा पाखुराले नाकमुख छोप्ने
साबुनपानीले मिचीमिची हात धुने
प्रशस्त पोसिलो र झोल पदार्थ खाने
ज्वरो आएको व्यक्‍तिले नगुम्सिएको र प्रशस्त हावा ओहोरोदोहर हुने कोठामा आराम गर्ने
मानिसहरूको भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने
शंकास्पद रोगी व्यक्‍तिबाट सकभर टाढा बस्ने
आँखा, नाक, मुखमा अनावश्यक रूपमा हात नलाने
सकभर अरू व्यक्‍तिसँग हात नमिलाउने
अरूले प्रयोग गरेको रूमाल वा कपडा प्रयोग नगर्ने
नाक मुख छोप्दा प्रयोग भएका रूमाल राम्ररी धोएर वा सफा गरेर मात्र पुनः प्रयोग गर्ने